Mhizha nemabhodhoro egirazi: iwo akanakisa mazano uye matipi | Green Renewables
Mhizha nemabhodhoro egirazi
Mhando dzakawanda dzemarara dzinogadzirwa mumba mazuva ese. Imwe yacho mabhodhoro egirazi. Unogona kuitwa zvakawanda girazi bhodhoro mhizha kubatsira kudzokorora uye kukurudzira kugona. Vanogona zvakare kushandiswa kuve nenguva yakanaka munguva yako yemahara. Kana zvakagadzirwa negirazi, tinokwanisa kushandisa runako rwegirazi, nekujeka kwaro uye zvimiro zvaro kukwanisa kugadzira chimwe chinhu chinobatsira nekuchiita chimwe chinhu kupfuura zvinhu zvakapfava zvekushongedza.
Muchikamu chino tichaenda kukuudza imwe hunyanzvi nemabhodhoro egirazi.
1 Mhizha nemabhodhoro egirazi
1.1 Marambi emabhodhoro
1.2 Chigadziko chemwenje kana kenduru
2 Mhizha nemabhodhoro egirazi edoro
3 Vhasi uye terrarium nemabhodhoro egirazi akashongedzwa
Magirazi egirazi kana mabhodhoro egirazi anokupa iwe mukana wekudzoreredza kushanda kwemhando yepamusoro, yakasimba midziyo inoraswa, senge bhodhoro rewhisky, waini, kana muto. Hazvisi nguva dzose kushora mabhodhoro egirazi kumudziyo unodzokororazve, asi zvinogona kupihwa kwechipiri hupenyu hunobatsira. Nekudaro, zvirinani kuidzokorora pane kuvasanganisa nemarara.
Nekudaro, pano tinovimbisa kuishandisa kuti tiite chimwe chinhu chinobatsira uye chakanaka, chinhu chakakodzera kuyemurwa, senge kupenda kana kupenda pavari. Pfungwa dzatinopa pazasi dzinongova dzimwe dzenzira dzinozivikanwa pakuzvigadzirisa, asi isu tinogona zvakare kuita zvimwe zvinhu zvakawanda navo, sekuzviisa padyo nemapofu uye kunakirwa iwo maratidziro ayo zuva rinokwevera mavari, kana kuzvizadza sezvinhu zvidiki.
Kunyangwe kana isu tiri handymen, ivo vakakodzera kwazvo kuvaka iyo yakashongedza madziro. Heano mamwe mazano ekugadzirisazve mabhodhoro egirazi uye nekuaita iwo akanaka ekushongedza emhizha.
Imwe yedzakanakisa nzira dzekugadzirisa zvinhu izvi kugadzira mamwe mwenje matafura akarembedza pamabhodhoro ewaini. Zviri nyore kupfuura zvinoita. Kuti tiite izvi, isu tichatanga kuchenesa bhodhoro. Isu tinobvisa zvitambi kana mapepa ane zvigadzirwa zvemhando. Kana ikasabuda zvachose, Tinogona kuichenesa nemvura inodziya kana doro pajira kuti tipedze kubvisa bepa.
Ipapo ticharamba tichicheka. Nzira iri nyore kushandisa shinda yakakora yekotoni (senge jira rekotoni rinoshandiswa pakukochekera) uye acetone. Isu tinoshandura chidimbu kuti chidimbure kashoma uye tobva tasunga shinda. Isu takaiburitsa pasi, ndokuinyudza muacetone ndokuidzosera panzvimbo. Panguva imwecheteyo tinoisa mvura yechando mumugomo mudiki kuti itonhore zvakanyanya.
Kana tangodzosera shinda mubhodhoro, tinoibatidza uye nekuitendeudza kuitira kuti murazvo usagare muchikamu chimwe chete. Isu tinopa iyo ingangoita gumi pamakumbo uye toinyudza mumvura. Kutaurirana nechando kunokonzeresa kuti nzvimbo yakasungirirwa kutsemuka, zvinozotibvumidza kuwana mukana wakakwana. Zvakakosha kupfeka magirazi epurasitiki kudzivirira magirazi shards kuti asapinda mumaziso edu.
Chigadziko chemwenje kana kenduru
Kugadzira machira, machira kana marambi, tinogona kushongedza mabhodhoro egirazi, kana kana akanaka kwazvo, senge imwe waini kana zvinwiwa zvichena, tinogona kuzvishandisa zvakananga. Kuti tiite izvi, tinoda ick yemwenje uye yekubatanidza, senge zvibatanidza zvepombi dzemvura dzinopisa dzekunze, Teflon, uye doro rakapiswa.
Isu tinovhara chikamu chejoinhi neTeflon kusvikira yagadziriswa kune dhayamita yebhodhoro, uye tobva taisa tambo. Tichava neheti refu. Mubhodhoro tinosvitsa mvura, mune iyi doro, asi inogona kunge iri parafini, uye tinoisa chivharo netambo. Tinogona kuishandisa nenzira iyi, kana isu tinogona kushandisa 4 inch pole uye kumisikidza screws kuigadzirisa pamadziro kuti irambe iri kure uye kwete kupisa madziro.
Mhizha nemabhodhoro egirazi edoro
Chokwadi isu pamusoro pebhodhoro regini ratakaraira. Neichi tinogona kugadzira sipo yekuparadzira. Izvi zvakapusa. Isu tinongoda dhisiki, kunyanya simbi, kuti rirembedzwe pamusoro pebhodhoro. Tinogona kuishandisa nesipo kugeza maoko muchimbuzi, sipo yekicheni kana chero kwatinogona kufungidzira.
Kana iwe uchifarira kuzviita neruoko, unogona kuavhara nemapepa ane mavara kana kutogadzira mifananidzo inoyevedza. Ingoisa kapepa uye iwe unogona kushandura iro rinonyanyisa bhodhoro kuita rakashongedzwa kushongedza.
Kumwe kushandiswa kwakanaka kugadzira girazi kubva mumabhodhoro, iwe unongoda cheka girazi, kana iwe unogona kuzviita nemaoko uchishandisa inopisa uye inotonhorera nzira kusvikira yatyoka, senge iyo yatinoshandisa kumagetsi emabhodhoro. Iwe unongofanirwa kuisa fungidziro yako kuti zvinhu chaizvo zvekuda kubuda.
Nzira yakanakisa yekupenda bhodhoro regirazi kushandisa pabhodhi pendi. Pamusoro pechitema, pane akasiyana mavara, ese ari matte uye akanaka kwazvo. Inogona zvakare kushandiswa kunyora mitsara nechoko. Isa jasi repako pabhodhi pamabhodhoro egirazi uye iwe unofema hupenyu hutsva mavari.
Vhasi uye terrarium nemabhodhoro egirazi akashongedzwa
Pabasa iri tinoda girazi kana bhodhoro regirazi uye mamwe mabhurugwa ekare. Chokwadi une rimwe bhurugwa rekare risingashandiswe uye unogona kuripa humwe hupenyu. Kana iwe uine akati wandei majean zviri nani zvikuru sezvo ichigona kuve yakashongedzwa nemhando dzakasiyana dzebhuruu.
Kuti tiite izvi, tinoisa mabhendi ane toni mune gradient kubva kune yakasviba kusvika kune yakajeka. Tinogona zvakare kushandisa akasiyana maturu emabhurugwa, akadai sehomwe kana mabhatani, uye kucheka mativi emasikisi akasiyana siyana kugadzira zvigamba kana macollage.
Terrariums ari mufashoni uye ndozvakaitawo mini minda. Iye zvino tinokurudzira kuti uzvigadzirezve mabhodhoro egirazi mumaturiamu kwaunogona kupa hupenyu kuzvirimwa zvako uye panguva imwechete shongedza kona yakakosha. Chii chimwe haufanire kugara uchinetseka nezvekuvadiridza. Iwe unogona zvakare kuvashandisa sekunge vaive hari asi, mune izvo kesi, akakosha mapoto ayo iwe auchazokwanisa kugadzira yakasarudzika mhedzisiro. Miti inotapira yakanakira kudyara mumhando idzi dzehari dzekugadzira nekuti dzinenge dzichida kutarisirwa kushoma. Ivo vakakwana pakushongedza imba yekutandarira.
Tinogona zvakare kugadzira yakanaka yakarembera mapindu ane mabhodhoro. Zadza gadheni rako, terra kana patio neruvara navo uye iwe unozopa yekutanga mamiriro kona iya pawakanga usingazive zvekuisa. Iwe haudi zvimwe kuti uwane chinovhundutsa mhedzisiro.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve hunyanzvi nemabhodhoro egirazi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Mhizha nemabhodhoro egirazi
Chii chine mutoro kudyiwa
Chii chinonzi PET